Archive du 20180810
Marc Ravalomanana Mandresy no toromarika
Tsy taitra, tsy maika, kanefa tsy tara i Marc Ravalomanana eo anatrehan’ny fanambarana ofisialy sy amin’ny fomba manetriketrika ny filatsahan-kofidiany,
Diaben’ny fahafahana 27 taona lasa izay, efa afaka ve i Gasikara ?
Daty manan-tantara ny 10 aogositra ho antsika eto Madagasikara satria tsingerintaona nitrangan’ilay diabe ho an’ny fahafahana izay nataon’ny vahoaka Malagasy tamin’ny taona 1991.
Fanorenana ifotony Niaiky i Pety Rakotoniaina fa sarotra io
Hiverina etsy amin’ny kianjan’ny 13 mey indray ny hetsi-bahoaka ho an’ny fanovana sy ny fanorenana ifotony tarihin-dry zareo avy eo anivon’ny Hetsika Fanorenana Ifotony (HFI) sy ny mpiara-dia aminy rehefa niato 2 andro.
Andriamiseza sy Doudou Niara-nisitri-belona
Ohatra ireny tsy niara-nifandrirotra ny fitarihana ilay hetsika politika « Force de changement » ireny taloha ny mpanao politika isany, Alain Andriamiseza sy Tolojanahary Maharavo na Doudou,
Hery Rajaonarimampianina Tsy te hitondra ny lokon’ny HVM intsony ?
Sarotra ho an’i Hery Rajaonarimampianina ny hiverina amin’ny toerany, raha ny lojika politika amin’izao.
Kandida filoham-pirenena Lojika raha mahazaka vahoaka daholo
Raha boriboriana dia 27 tapitrisa eo no isan’ny Malagasy raha ny fanisam-bahoaka farany. Lojika raha mahazaka vahoaka daholo izay kandida nanao famoriam-bahoaka rehetra.
Fahazarana mampiasa fahefam-panjakana Ho hitan’ny havany eo amin’izay ny HVM
Tsy hita izay fanovana, fampandrosoana, fanatsarana ny fiainam-bahoaka satria nahazo vahana loatra ny tsy fanarahan-dalàna, ny fisian`ny tsimatimanota, ny kolikoly… teto amintsika.
Famotehana firenena tamin’ny 2009 Nanody tamin’ny ekipan-dRajoelina ?
Aoka hazava fa fankahalana sy fialonana an-dRavalomanana no nanonganam-panjakana teto tamin’ny 2009. Aiza daholo moa izao ireo olona tamin’izany ?
Miarahaba jean, mitsingerina androany ilay diabe indray maka iry ee..mino aho fa tadidinao tsara izany daty izany na dia mboa tsy tao anatin’ny politika mihitsy aza ianao tamin’izany fotoana.
Hifarana anio zoma amin’ny hetsika fampakarana grady « Passage de grade »
Poule des As andro faha-2 Tena hangotraka ny lalao any Antsirabe
Lalaon’ny samy efa nandresy no hotontosaina any amin’ny kianja Rabemanjara any Mahajanga amin’ny alahady 12 aogositra ho avy izao eo amin’ny andro faha-2 amin’ny “Poule des As Champion’s League Malagasy”.
« …Tany fotaka, Aomby biby, vola taratasy, olombelo harena … »,
Fiantsonan’ny fiara eny Tsiazotafo Fanina tanteraka ireo mponina
Fanina ny amin’ny zava-misy iainany ankehitriny momba ny fiantsonana (parking) hametrahana fiara ireo mponina ao Tsiazotafo, Boriborintany fahatelo.
Mpampianatra mitokona Nitaraina tany amin’ny Firenena Mikambana
Tsy hijanona ny hetsik’ireo mpampianatra mitokona eto an-drenivohitra raha tsy valian’ny fitondram-panjakana ny fitakian’izy ireo.
Fampandrosoana ny maha olona Tratra aoriana i Madagasikara
Mbola mila ezaka be i Madagasikara raha mijery ny tatitra nasionaly momba ny fampandrosoana ny maha olona (RNDH) eto Madagasikara nataon’ny tetikasan’ny firenena mikambana PNUD.
Jiro manazava ny lalan’Ampitatafika Nitombo avo 10 heny
Anisan’ireo kaominina 10 voantsonga nisitraka ny fampiofanan’ny birao mahaleotena misahana ny ady amin’ny kolikoly na ny Bianco notontosaina tetsy amin’ny Pave Antaninarenina omaly ny kaominin’Ampitatafika.
Antananarivo sy ny manodidina Hiampy ny toby manadio sy mamatsy rano
Nitsidika ireo toerana mpamokatra sy mpamatsy rano fisotro madio an'Antananarivo sy ireo faritra manodidina ny renivohitra ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina omaly, izay nidina ifotony tetsy Mandroseza ary nitohy teny Soalandy Ankadivoribe.
Vehivavy mpandraharaha Malagasy Mbola vitsy no misehatra amin’ny angovo
Omaly alakamisy 09 aogositra no natao tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy ny atrikasa fampiofanana voalohany ho fanamafisana ny fahaiza-manaon’ny fikambanan’ny vehivavy mpandraharaha eto Madagasikara (GFEM) eo amin’ny sehatry ny angovo.
Herinaratra Mila havaozina ny fitaovana sy ny fitantanana azy
Miverina indray ny fahatapahana herinaratra matetitetika eto an-drenivohitra na dia tsy mitsaha-miakatra aza ny vidin-jiro.
Fitrandrahana an-tsokosoko ny ala Ho henjana ny sazy ho an’izay tratra
Nampahafantarina omaly alakamisy 09 aogositra tetsy amin’ny Hotely Carlton Anosy ny atrikasa momba ny politika vaovao hifehezana ny ala sy ny fambolen-kazo eto Madagasikara.